Cat Frazer – Blink
About Cat Frazer
Meanwhile lets just say that we are proud Cat Frazer contributedawhooping 10 entries.
Entries by Cat Frazer
July 31, 2017 in blog, Myanmar /by Cat Frazer
Am I Handsome? https://www.facebook.com/otsthrr.nge/videos/1563591310338700/ ဒီဗီဒီယိုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဇွန်လအတွက် လူကြည့်ရှုမှုအများဆုံး ဗီဒီယိုလို့ ပြောလို့ရတဲ့ “ကျွန်တော်ချောလား” ဆိုတဲ့ Prank ဗီဒီယိုပါ။ Prank ဗီဒီယိုတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားနေတာကြာပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှ လုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယခုဗီဒီယိုကိုတင်ထားတဲ့ Nyein Chan Htet Aung ဆိုသူကလည်း ယခင်ကတည်းက Prank ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခု “ကျွန်တော်ချောလား” ဗီဒီယိုကတော့ သူ့ကို မိန်းကလေးတော်တော်များများ သတိထားမိသွားစေခဲ့ပါတယ်။ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူစိမ်းတွေကို ကျွန်တော်ချောလားဆိုပြီး လိုက်မေးဖို့ကတော့ တော်ယုံလူ မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးတော့ ထင်တယ်နော်။ ၃ မိနစ် နဲ့ ၃၄ စက္ကန့် ကြာချိန်ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ React […]
July 31, 2017 in blog, English /by Cat Frazer
Top Viral Videos in Myanmar Am I Handsome? https://www.facebook.com/otsthrr.nge/videos/1563591310338700/ “Am I Handsome?” is the winner for this month as the most-viewed video. The video was posted Nyein Chan Htet Aung, who has become the biggest prankster in Myanmar and has become super popular among Myanmar’s youth. The videos he posts are the first of their […]
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Customer တွေနဲ့ Engagement အများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်။ Facebook ကတော့ Engagement အများကြီးယူနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ လူတိုင်း Facebook ပေါ်မှာရှိကြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကိုလည်း Sharing လုပ်နေကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို Social Media ပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူလုပ်မယ်ဆိုရင် အရောင်းပိုင်းလည်းတိုးလာမှာဖြစ်သလိုကိုယ့် Brand နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူပိုသိအောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Tipလေးတွေကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်အကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရတယ်ဆိုတာကို လူအများသိအောင်သိအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်၊ မီးဖိုချောင်၊ အစားသောက်နဲ့ Meunတွေပါတဲ့ပုံတွေကို မျှဝေပေးပါ။ အဲ့ဒါမှကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုင်နဲ့ အစားသောက်တွေကို အမှန်အကန်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာဘယ်လိုစားသောက်ဆိုင်မျိုးလည်းဆိုတာကို Audience တွေသိအောင်လုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Fanတွေကို […]
Our team have put togetheraguide to help you get you more customers through your doors Restaurants in Yangon haveagreat opportunity to get really high engagement from their fans. Facebook is huge here, everyone’s on it and everyone’s sharing their favourite food and restaurant experiences! If your business invests time in social […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာအလျှင်အမြန်တိုးတက်လာမူများကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း Brand များအနေဖြင့် သူတို့ရဲ့ Markeing Plan များထဲမှာ လူမူကွန်ရက်ကိုဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာတွေ၊ လူမူကွန်ရက်သုံးခြင်းဖြင့် ရောင်းအားတိုးလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးတိုင်းတာရမယ်ဆိုတာတွေက သူတို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဟာ Facebook page လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိကြပေမယ့် facebook pageတွေကနေ ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပြန်ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာက လုပ်ငန်းတိုင်းမေးနေကြတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့fansတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Platform တစ်ခုဖန်းတီးထားပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်း Brand များအတွက် ဘယ် Social Media ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ရခက်လောက်အောင်ကို Social Media Channel များမှာ များပြားလာပါတယ်။ Twitter, Pinterest, Snapchat, Instagram, Tumblr, Youtue နဲ့ Facebook စတဲ့ လူမူကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ ကိုယ့် Content ကို […]
Myanmar Social Media Dos and Don’ts Myanmar’s digital space is changing so quickly it’s hard for brands to know how to include social media into their overall marketing plan and how to best to measure if it’s helping to increase sales. Every business knows that they needaFacebook page, but how do you make […]
ဘာကြောင့် Instagram ဟာ မြန်မာ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာမှာလဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Social Media လို့ခေါ်တဲ့ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ Instagram အသုံးပြုသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိလာပါပြီ။ Instagram ဆိုတာ ဖေ့စ်ဘွတ်လိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ကို တင်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပါအဝင် ကိုယ်သိချင် ခင်ချင်တဲ့သူတွေကို Follow လုပ်ထားပြီး သူတို့တင်တဲ့ ပုံတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်လို့ရတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီတော့ နောင်မကြာမီကာလအတွင်းမှာ Instagram ဟာ မြန်မာ့လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကျော်လာပါ တော့မယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ 1. လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Instagram အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယို Post ပေါင်း ၉၅ သန်းနဲ့့၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယမ်သော […]
Globally, Instagram has exploded into the public domain over the past few years. There are nearly 100 million photos and videos posted to Instagram every single day! It’s mind-boggling. Instagram has seen huge growth over the last four years and now has over 700 million active users worldwide. In Myanmar, the number of users is […]
Content Marketing ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကဘာကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ Brand နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိပြီး လိုက်လျောညီထွေမှုရှိတဲ့ Content တွေကို တီထွင်ဖန်တီးပြီး ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ Marketing နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ Content Marketing ဟာဆိုရင် စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့သာမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရာမှာလည်းအရေးပါလှပါတယ်။ Content ကိုဖန်တီးရာမှာဆိုရင် ပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်ပြီးတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ မတူညီတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးနည်းလမ်းများချမှတ်ရာမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြားသူတွေရဲ့ content ကနေ ကွဲထွက်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းလေးတွေ မ ျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Engagement ပိုမိုရရှိနိုင်ဖို့ ဖတ်ရှုသူများအတွက် မေးခွန်းပုံစံများဖန်တီးခြင်း Engagement များများရဖို့အတွက်ဆိုရင် မေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေနဲ့ စကားဝိုင်းဖွဲ့ရာမှာ အထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ Product […]
Content is everywhere on social media andalot of it is ofareally poor quality. If you’re sick of havingaboring advert, low quality movie, stock images and written content that is badly spelt and not engaging you’re in the right place, So am I! Asadigital marketing professional, I’ve seen […]